Hogamiye Waare oo Warbixin siiyey Guddiga Qaran ee…
Madaxweynaha Dowlad-gobaleedka Hirshabelle, Maxamed Cabdi Waare waxa uu xalay ka qeyb galay Shirka Guddiga Qaran ee Ka-hortaga COVID 19 ee uu Ra’isul-wasaare Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu guddoominayey.
Kulankaasi oo ku dhacay Habka Maqalka iyo Muuqaalka ee Video Call Conference ayaa waxaa looga hadlay dadaaladda lagu xakamaynayo Faafista Fayriska Koroona iyo Garmadka dadka ay waxyeelladu ka soo gaareen Fatahaadda Webiyada iyo Daadadka Roobka.
Madaxweynaha Hirshabelle oo ka hadlay Kulankaasi waxa uu faahfaahin ka bixiyey Xaalladda Hirshabelle iyo dhibaatooyinka ka dhashay Webiga ku soo fatahay magaallooyinka Beled-weyne iyo Jowhar.
Boqolaal qof ayaa ku barakacay Fatahaadaasi, kuwaasi oo haatan ciirsi biday Deegaano cidlo ah oo aan lahayn waxyaabaha daruuriga u ah Nolosha Aadanaha.
Dadka ku barakacay Fatahaadda waxay had iyo jeer qeylo-dhaan u diraan DF, Maamul-gobaleedyada, Ganacsatada iyo Hay’addaha Samafalka Caalamiga iyo kuwa Maxaliga, si ay ugu fidiyaan Taageero Aadminimo.
Warbixin uu dhawaan soo saaray Xafiiska QM ugu qaabilsan Isku-xirka Hawlaha Samafalka ee UN OCHA waxaa lagu sheegay inay ku-dhawaad hal milyan oo qof dhibaato kala kulmeen Fatahaada iyo Roobabka ka da’ay qeybo ka mid ah Bartamaha Soomaaliya, iyadoo ay 26 qof ku geeriyoodeen, halka ay in ka badan 280,000 oo kalena ku barakaceen.